बिहेका लागि केटा नपाएपछि युवतीहरुले यस्तो गर्न थालेपछि…. ‘ « Gaunbeshi
बिहेका लागि केटा नपाएपछि युवतीहरुले यस्तो गर्न थालेपछि…. ‘
भिक्टोरियामा १ सय जना महिलामा केवल ९८ जना मात्र पु’रुष छन् । अर्थात् पुरुष भन्दा ६० हजार बढि महिला छन् भिक्टोरियामा । यता चीनमा भने महिलाको खडेरी छ र एकल पु’रुषहरुको संख्या बढिरहेको छ । भनिन्छ, भविष्यमा चीनका २५ प्रतिशत पु’रुष कि